Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Teessoowwan
Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Olkaa’I, maxxansiif ergi
Qaaqa Tarree Teessoo Fili teessoowwaniif, bakka madda deetaa filachuu, teessoowwan haaraa ida'uu, ykn tarree teessoo haaraa keessatti barreessuu itti dandeessuu bana.
Yommuu kuusaawwan tokko tokko kanneen makiinsa ergannoo keessatti fayyadan wardii Calc keessatti gulaaltu, jijjiiramoonni kunneen makiinsa ergannoo keessatti hin mul'atan.
Galmeen kun garee teessoo ofkeessaa qabaachuu mala
Garee teessaa galmee makiinsa ergannootti idaa'a.
Teessumaa garee teessoo isa fayyadamuudhaaf barbaaddu fili.
Sararawwan dirreewwan duwwaa tahaan gadqaba
Teessoo keessaa sararawwan duwwaa akka hafu dandeessisi.
Qaaqa Garee Teessoo Fili bana.
Qaaqa Dirreewwan Firoomsi bana.
Duraargii odeeffannoo isa duraanii yk kaassaa deetaa itti aanuu banuuf qabduu sakkatta'ii fayyadami.
Title is: Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Teessoowwan